ကလေးတွေ ဖုန်းအသုံးများရင် ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် – Myanmar Magazine
ကလေးတွေ ဖုန်းအသုံးများရင် ဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်
March 27, 2019 March 27, 2019 myanmarmagazine	ဗဟုသုတ
ခေတ်ဆိုတာလည်း အဆန်းသားဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘဝတုန်းက အားလပ်ချိန်ဆိုတာနဲ့ အပြင်ထွက်ပြီး ဘောလုံးကန်မယ်၊ စာအုပ်ဖတ်မယ်၊ လူကြီးတွေနဲ့ လျှောက်လည်မယ်၊ မုန့်စားမယ်၊ ဒါတွေလောက်ပဲ ရှိခဲ့တာလေ။ အိုင်တီခေတ်လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီဘက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကလေးတွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်းသုံးရင် သုံး၊ မသုံးရင် တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်ပြီးတော့ပဲ အချိန်ကုန်နေတတ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
အရင်တုန်းကဆို ကျွန်တော်တို့ အရမ်းဆော့လွန်းလို့ လူကြီးတွေကတောင် မဆော့ပါနဲ့၊ စာလုပ်ပါလို့ ဆူပူခဲ့ရတဲ့ ခေတ်ကနေ အပြင်ထွက်ကစားပါဆိုပြီး ကလေးကို ပြန်ပြောရတဲ့ ခေတ်ကို ဆယ်စုနှစ်လေး အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ရောက်သွားတာ အံ့သြစရာပါပဲ။ ကောင်းတဲ့ နေရာက ကြည့်ရင် ဒီလိုနည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတော့ ကလေးတွေလည်း ရှာဖွေချင်တဲ့ အရာတွေ လွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေလို့ ရတယ်၊ အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ မကောင်းတဲ့ဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့ ဉာဏ်ရည်နဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကလေးအရွယ်မှာ ဘယ်နှစ်နာရီ အများဆုံး ဖုန်းသုံးခွင့်ပေးသင့်လဲ။
မိဘတွေအနေနဲ့ သင့်ကလေးကို တစ်နေ့လျှင် အများဆုံး ၂နာရီပဲ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီ အသုံးပြုခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီးထိုင်ပြီး ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို ငေးကြည့်နေရင်း ဂိမ်းဆော့နေလို့ ကလေးတွေအတွက် ပညာရေးရော၊ ကျန်းမာရေးအရပါ ဘာအကျိုးမှ မရှိပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဖုန်းစွဲလမ်းစိတ် ဖြစ်လာရင် ကလေးရဲ့ နောင်ရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို တစ်နေ့လျှင် ၂နာရီထိပဲ ဖုန်းသုံးခွင့်အချိန် သတ်မှတ်ပေးထားပါ။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာ အပြင်ထွက်ပြီး ကစားတာ၊ မိသားစုလိုက် ပျော်ပျော်ပါးပါး လျှောက်လည်တာမျိုး၊ အားကစားတစ်ခုခု လိုက်စားဖို့ တိုက်တွန်းပေးပါ။
ဖုန်းကြည့်တာ များလာရင် ကလေးကို ဘယ်လိုထိခိုက်စေနိုင်လဲ။
ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် မျက်စိထိခိုက်လာမှာပါ။ ကလေးတွေဆိုတာ အရာရာကို စူးစမ်းလေ့လာတဲ့ စိတ်ရှိတာမို့ ဖုန်းကို မျက်နှာနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်မှာ ထားပြီး အားစိုက်ကြည့်နေတဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မျက်စိမှုန်လာမယ်၊ မျက်စိအာရုံကြော အားနည်းလာမယ်၊ အမြင်အာရုံထိခိုက်မယ်။
နောက်ထပ် ဖြစ်လာနိုင်တာကတော့ ကျောင်းစာမှာ အာရုံမစိုက်နိုင်တော့တာပါပဲ။ စိတ်က ဖုန်းသုံးဖို့၊ ဂိမ်းဆော့ဖို့အကြောင်းပဲ အာရုံရောက်နေတော့ သင်နေသမျှ စာတွေကို မမှတ်မိတာ၊ စာတွေ လွတ်သွားတာ၊ ကျောင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အာရုံမစူးစိုက်နိုင်တော့တာ၊ အမှတ်တွေ နည်းသွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကလေးတွေကို အဝလွန်စေတဲ့ တရားခံတွေထဲမှာ ဖုန်းအသုံးပြုခြင်းလည်း ပါနေပါတယ်။ အပြင်ထွက်ပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမနေဘဲ အမြဲ ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်လိုက်၊ အိပ်လိုက်နဲ့ ဖုန်းသုံးနေတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်က တက်လာပြီး အဝလွန်လာတော့တာပေါ့။
အဝလွန်တဲ့ ပြဿနာကို ပေါ့ဆလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါအပြင် တခြားသော ရောဂါပေါင်းစုံ ဖြစ်လာစေဖို့ အစလက္ခဏာမို့လို့ပါပဲ။ကျန်းမာသွက်လက်ဉာဏ်ရည်ထက်တဲ့ ကလေးဖြစ်ဖို့ မိဘတွေ ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ။
ကလေးအတွက် ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေတဲ့ အစာအာဟာရတွေကို စုံလင်စွာ ကျွေးပေးပါ။ ညဘက်မှာ အိပ်ချိန်ပြည့်ဝစွာ အိပ်ဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ညအိပ်ခါနီးမှာ ဖုန်းသုံးတဲ့ အကျင့်တွေ တွေ့ရင်လည်း မိဘတွေက သေချာဆုံးမပြောဆိုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို တန်ဆေး လွန်ဘေးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဖုန်းလုံးဝမသုံးရဘူးလို့ တားမြစ်တာထက် အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ ပေးသုံးပါ။ တစ်နေ့ကို ၂နာရီထက်ပိုပြီး ပေးမသုံးပါနဲ့။
ပညာရေးဆိုတာ ကလေးဘဝ အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးတာမှန်ပေမယ့် ထိုင်ခုံမှာပဲ အမြဲငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး တစ်နေကုန် စာလုပ်ရင်လည်း ကလေးကို အဝလွန်စေနိုင်တယ်၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီး စာထဲ အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ခဲယဉ်းနိုင်တယ်ဆိုတာ မေ့ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကလေးဘဝနဲ့ အနာဂတ် သာယာအေးချမ်းဖို့ မိဘတွေကိုယ်တိုင် ဒီအရာတွေကို သေချာဂရုစိုက်ပေးဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်။
← လိင်တူချစ်သူများအား မသေမချင်း ကျောက်ခဲဖြင့် ပစ်သတ်အပြစ်ပေးရန် ဘရူနိုင်းစီစဉ်
ရွှေစည်းစိမ်တည်းခိုးခန်းတွင်း ရက်စက်လွန်းတဲ့ ၁၇ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး သတ်ခံရမှု သတင်းဓာတ်ပုံ အပြည့်အစုံ →
November 27, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ကံအညံ့တွေကြုံနေလား? လာဘ်ပွင့်ချင်လား? အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး လက်ထက်က ယတြာကောင်း